'पैसा भए पनि खाद्यान्न किन्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ' | Nepal Flash
कोरोनाका कारण खाद्य संकट देखा पर्छ, भारतले आफैँलाई नपुगेर खाद्यान्न हामीलाई नपठाउन सक्छ
आज असार १५, ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ महिना मानिने असारको मध्य दिन । राष्ट्रिय धान दिवससँगै तामझामका साथ रोपाइँ महोत्सवको रुपमा मनाउने गरिन्छ । सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आए पनि, यसको उत्पादकत्व बढाउने विषयमा खासै ध्यान नदिएको कृषि विज्ञ बताउँछन् । हाल विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोप छ । यसले गर्दा नेपालमा मात्र नभई विश्वभर धान उत्पादनमा गिरावट आउने अनुमान छ । नेपालमा धान उत्पादनको अवस्था, आयातको अवस्था र आत्मनिर्भर बन्न अपनाउनुपर्ने योजनाका विषयमा नेपाल फ्ल्यासका लागि श्यामसुन्दर पुडासैनीले धानविद् भोलामानसिंह बस्नेतसँग गरेको वार्ताको सम्पादित अंश ।
कोरोना महामारीका कारण धेरै समय विश्वका धेरै मुलुक लकडाउनमा रह्यो । धेरै समय कृषिदेखि आर्थिक गतिविधि शून्य रह्यो । यसले सम्भावित खाद्य सङ्कटको अवस्था निम्त्याउने कत्तिको खतरा छ ?
विश्वमा जताततै कोरोना भाइरसको समस्या छ । यसको समाधान भएपछि खाद्यान्नमा भारी कमी आउने निश्चित छ। जसको कारण विश्वभर भोकमरी आउने कुरालाई नकार्न सकिन्न । यसलाई मनन गर्नुपर्छ ।
विश्वभरका विभिन्न विषयमा खारिएका कृषिविज्ञ, प्राविधिकसँग राय, सल्लाह लिनुपर्छ । नेपाल सरकारले सोहीअनुसार अगाडि नै सोच्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यस प्रकोपले सताएको बेलामा धेरै देशमा सलहनामक फट्याङ्ग्रा धेरै देशमा आएको छ । यसले पनि खाद्यसंकट निम्ताउन थप मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
तपाईं नेपालकाे खाद्य अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिले तितो यथार्थता के हो भने हामी ९० प्रतिशतभन्दा बढी धान, चामल भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ । त्यसैले अहिले हामी धान उत्पादन निक्कै थोरै परिमाणमा गरिरहेका छौँ भन्ने देखाउँछ । बजेटमा देशलाई हरहालतले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना आउनुपर्ने हो । तर, त्यो देखिएन । हामीसँग विभिन्न बालीका जात, बिउ, प्रविधि छन् । तर, त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्ने तदारुकता भएन ।
नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने हामीसँग खल्तीमा पैसा भए पनि खाद्यान्न किन्न नपाउने अवस्था आउने खतरा छ ?
के हामीले बाँच्नका लागि पनि सधैँ अरूको मुख ताक्ने हो ? लकडाउनमा हालै भारत सरकारले ८० करोड जनसङ्ख्यालाई तीन महिनासम्म निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ । घरपालुवा पशुपक्षी माछाका दाना, पानीमा पनि विशेष ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । फलफूल, तरकारीको उत्तिकै महत्त्व छ । भारतले अब आफैँलाई नपुगेर बाहिर पठाउने अवस्था नहुन पनि सक्छ ।
यसअघि सन् २००७–००८ मा विश्वमा खाद्यसंकट भएको थियो । धान, चामल, गहुँजस्ता खाद्यान्न निर्यातको चार वर्षसम्म प्रतिबन्ध भयो । हामीले भारतबाट खाद्यान्न खरिद गर्न पाएनौँ । अब त्यो सन्दर्भलाई यहाँ स्मरण गर्न ढिलो भइसक्यो । हामी आफैँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने खल्तीमा पैसा भएर पनि खाद्यान्न किन्न नपाउने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । यसका लागि धेरै पहिलाको उदाहरण जानुपर्दैन, पाँच वर्षअघि नाकाबन्दीको समयमा पनि यो समस्या निम्त्याएको थियो । अब पछिल्ला प्रकोपका कारण पनि यो समस्या निम्तिने खतरा छ ।
कृषिवज्ञका हिसाबले यहाँ कृषि क्षेत्रमा के-कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ ?
मुख्य पहिलो खाद्यन्नको स्रोत बर्खेधान अहिले रोप्ने समय छ। विगतमा भन्दा यसपालि मनसुन समयमै भएकाले रोप्न सहज छ। यसअघि बिउ रोप्ने समयमा पनि पानी परेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो । यसअघि नेपाली कृषकले मुख्य पहिलो खाद्यान्न बालीको रूपमा चैतेधान लगाएका थिए । त्यो अहिले काट्ने समय हो ।
कृषकहरूले लगाएका मकै भित्राएका छन् । चैते धान र मकैलाई पनि पानी पुगेको थियो । प्रकृतिले त साथ दियो, तर राज्य संयन्त्रले राम्रो काम नगर्दा बीचमा युरिया मल समयमा तत्काल उपलब्ध भएन । उदाहरणका लागि एक किलो नाइट्रोजनले २० किलोग्राम धान उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ । यस्तो समयमा युरिया मल र किसानले नपाउँदा ठूलो समस्या झेल्नुपर्याे । अब पनि बर्खेधान लगाएपछि त्यो समस्या भएन भने यसपालि उत्थान राम्रो हुने देखिन्छ ।
भनेपछि धानको उत्पादन बढाउन अब सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । मलबिउ कृषिऔजार उपलब्ध गराउनुपर्छ ?
अहिले कोरोनाको महामारी भयो । सबै क्षेत्र बन्द भयो । खाद्यसंकट आउने भयो भनेर अब खेती गरौँ र उत्पादन गरौँ भन्ने हुँदैन । अहिले सङ्कटको समयमा मात्र उत्पादन गर्छु भन्ने हो भने, त्यो पैसाले काम गर्ने छैन । त्यसबेला खाद्यसामग्री आजको भोलि उत्पादन हुने होइन । अतः कोरोना महामारीको रोकथाम गर्नुपर्छ । सरकारले अर्कोतर्फ कृषि उत्पादन र बजारीकरण पहिलो प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामग्रीको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
तर, त्यो समयमै उपलब्ध गराइएन भने त्यसको खास अर्थ हुँदैन । अहिले कृषि उत्पादनको लागि आधुनिक प्रविधि धेरै ठाउँमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । यसैले पनि यसपटक विगतभन्दा खासै धेरै धान उत्पादन नहुने देखिन्छ ।
आर्थिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने नेपालमा धान उत्पादन १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हने गरेको छ । सालाखाला यस वर्ष पनि त्यस्तै रहने अनुमान छ।
के हामी धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनाैँ ?
चाहँदा सकिन्छ । गत साल नेपालमा १४ लाख ९१ हजार हेक्टरमा धान खेती भयो । ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटक उत्पादन भयो । उत्पादकत्व भने तीन हजार आठ सय किलोग्राम प्रतिहेक्टर रहेको थियो । झन्डै अट्ठाइस, तीस अर्ब रुपैयाँबराबरको चामल आयात भएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ ।
झापा एउटा जिल्लामा मात्र धेरै ठूलो मात्रामा धान उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यहाँ उत्पादन हुने धानलाई हेर्ने हो भने नेपालका अरू २२ वटा पहाडी जिल्लाको भन्दा बढी हुने गर्छ । अब नेपालमा चैते, भदैया, वर्षे, हिउँदे (बोरोे) गरी वर्षैभरि धान खेती गर्न सकिने प्रविधिको विकाससमेत भइसकेको छ । तर, हामीले धानबालीलाई के कस्तो प्राथमिकता दिएका छौँ, सोको मूल्याङ्कन गर्दै योजनाबद्ध रुपमा सुधार गर्दै गएमा, आगामी आठ/दश वर्षमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।
धान उत्पादनसँग र मुलुकको आर्थिक समृद्धि कसरी जोडिएको छ ?
धान नेपालका लागि एक प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । धानको उत्पादन राम्रो भयो भने देशको आर्थिक स्थिति माथि जान्छ । धान उत्पादन घट्यो भने आर्थिक स्थिति तल झर्छ । देशले १० प्रतिशत धानको उत्पादन बढाउन सकियो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतले हुनेछ । त्यसैले धान बालीको अनुसन्धान र विकास कार्यक्रमलाई देशले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष सिंचित क्षेत्र बढ्दै गएको अवस्थामा चैते धान खेती गर्न सकिने क्षेत्र बढाउँदै जानुपर्छ । धानको उत्पादन सहजै बढाउन सकिने भएकाले चैतेधान खाद्य सुुरक्षाका लागि वरदान साबित हुन सक्छ । नेपालको कुल खाद्यान्नमा धानको ५० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान हुने गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र (एजीडीपी)मा क्रमशः करिब सात २१ प्रतिशत योगदान रहँदै आएको छ ।
#भोलामान सिंह बस्नेत #राष्ट्रिय धान दिवस
#नेकपा #कोरोना #मृत्यु #पक्राउ #नेप्से #नेपाली कांग्रेस #फुटबल #डोनाल्ड ट्रम्प